I-Flonase vs. Nasonex: Umehluko, ukufana, nokuthi yikuphi okungcono kuwe - Izidakamizwa Vs. Umngani | Julayi 2021
Inkampani, Izindaba Imininingwane Yezidakamizwa, Imfundo Yezempilo Izindaba Ukuphila Kahle Imininingwane Yezidakamizwa, Izindaba Imfundo Yezempilo, Ukuphila Kahle Inkampani, Ulwazi Lwezidakamizwa Izidakamizwa Vs. Umngani Umphakathi, Ukuphila Kahle Inkampani, Imfundo Yezempilo Izindaba, Wellness Imfundo Yezempilo Inkampani, The Checkout Umphakathi Cindezela
Main >> Izidakamizwa Vs. Umngani >> I-Flonase vs. Nasonex: Umehluko, ukufana, nokuthi yikuphi okungcono kuwe
I-Flonase vs. Nasonex: Umehluko, ukufana, nokuthi yikuphi okungcono kuwe
Ngabe uhlushwa ikhala eligobhoza noma eligobayo, uthimule, ulume, unamehlo amanzi? Uma kunjalo, ungaba ngomunye wabantu baseMelika abayizigidi ezingama-50 abaphethwe ukwaliwa yizifo unyaka nonyaka. I-Flonase (i-fluticasone) ne-Nasonex (i-mometasone) yimithi emibili yokugunyaza impumulo evunyelwe yi-FDA esetshenziselwa ukwelashwa kwezimpawu zokungezwani komzimba. Ziyaziwa njenge-glucocorticoids, noma ezaziwa kakhulu ngama-steroids. Zisebenza ngokunciphisa ukuvuvukala nokuminyana ezindimeni zamakhala, ngaleyo ndlela kunciphise izimpawu zokungezwani komzimba. Yomibili le mithi yaziwa njenge-nasal steroids, kepha i-Flonase neNasonex zinomehluko othile ophawulekayo, esizowuchaza ngezansi.
Uyini umehluko omkhulu phakathi kweFlonase neNasonex?
I-Flonase (i-fluticasone) iyi-nasal corticosteroid, noma evame ukubizwa nge-nasal steroid. Itholakala ngudokotela ngesimo sayo esijwayelekile, kanye ne-over-the-counter (OTC) ngomkhiqizo nangohlobo olujwayelekile. Umkhiqizo wegama le-OTC ubizwa ngokuthi i-Flonase Allergy Relief spray futhi uyatholakala ekwakhiweni kwabantu abadala kanye nokwakhiwa kwezingane. Iphinde itholakale ngesifutho senkungu esimnene, esibizwa ngeFlonase Sensimist, kukho konke ukwakheka komuntu omdala nokwabantwana. I-Flonase ingasetshenziswa kubantu abadala nezingane ezineminyaka engu-4 nangaphezulu.
I-Nasonex (i-mometasone) nayo iyi-nasal steroid. Itholakala ngomkhiqizo nangohlobo olujwayelekile, ngencwadi kadokotela kuphela. Ingasetshenziswa kubantu abadala, kanye nezingane ezineminyaka engu-2 nangaphezulu.
kuthatha isikhathi esingakanani ukusebenza nge-sudafed
Umehluko omkhulu phakathi kweFlonase neNasonex
Isigaba sezidakamizwa I-Nasal corticosteroid I-Nasal corticosteroid
Isimo somkhiqizo / ejwayelekile I-OTC: I-Brand ne-generic
I-Rx: Okujwayelekile I-Rx: Brand and generic
Ngubani igama elijwayelekile? I-Fluticasone propionate I-Mometasone furoate
Izidakamizwa zingena ngaziphi izinhlobo? I-OTC: I-Flonase Allergy Relief nasal spray (abadala nezingane)
Isifutho sempumulo seFlonase Sensimist (abadala nezingane)
I-Rx: I-fluticasone ejwayelekile Isifutho sekhala
Uyini umthamo ojwayelekile? Abantu abadala: izifutho ezi-2 (ama-50 mcg ngesifutho ngasinye) ekhaleni ngalinye nsuku zonke
noma 1 fafaza ekhaleni ngalinye kabili ngosuku Izinsana nezingane ezineminyaka engama-4 nangaphezulu: 1 fafaza ekhaleni ngalinye nsuku zonke (kungakhuphuka okwesikhashana kube izifutho ezi-2 ekhaleni ngalinye ngosuku, bese kwehla futhi uma izimpawu zilawulwa) Abantu abadala: izifutho ezi-2 (ama-50 mcg ngesifutho ngasinye) ekhaleni ngalinye kanye ngosuku
Izingane ezineminyaka engu-2 kuya ku-11:
Isifutho esingu-1 ekhaleni ngalinye kanye ngosuku
Yelashwa isikhathi esingakanani? Isikhathi esifushane noma sesikhathi eside (kuya ngezimpawu kanye nemiyalo kadokotela)
* thintana nodokotela uma ingane yakho idinga ukwelashwa izinyanga ezingaphezu kwezingu-2 ngonyaka Isikhathi esifushane noma sesikhathi eside (kuya ngezimpawu kanye nemiyalo kadokotela)
* thintana nodokotela uma ingane yakho idinga ukwelashwa izinyanga ezingaphezu kwezingu-2 ngonyaka
Ubani ovame ukusebenzisa umuthi? Abantu abadala, intsha, izingane ezineminyaka engama-4 nangaphezulu ubudala Abantu abadala, intsha, izingane ezineminyaka engu-2 nangaphezulu
Izimo eziphathwe yiFlonase vs. Nasonex
I-Flonase ikhonjisiwe ekuphathweni kwezimpawu zomlomo zonyaka noma ezihlala isikhathi eside (unyaka wonke) i-nonallergic rhinitis (ukuvuvukala kwamakhala) kubantu abadala kanye nezingane ezineminyaka engu-4 nangaphezulu. I-nonallergic rhinitis yisimo lapho uhlangabezana khona nezimpawu zamakhala ezifana nezimpawu zokungezwani komzimba noma i-hay fever kepha izimpawu azinayo imbangela eyaziwayo. I-Flonase nayo iyasetshenziswa off-ilebula ngeminye imibandela embalwa, echazwe ngezansi.
I-Nasonex isetshenziselwa ukwelashwa kwezimpawu zamakhala ze ngenkathi ethile kanye ne-perennial allergen rhinitis kubantu abadala nezingane ezineminyaka engu-2 nangaphezulu. Iphinde isetshenziselwe ukuvimbela ukungezwani komzimba nezinkathi ezithile kubantu abadala nezingane ezineminyaka engu-12 nangaphezulu, kanye nokwelapha ama-polyp nasal kubantu abadala nezingane ezineminyaka engu-18 nangaphezulu. INasonex futhi inokusetshenziswa okungekho kwelebula, okuchazwe ngezansi.
Ngingathatha i-4 ibuprofen ka-200 mg
Isimo UFlonase I-Nasonex
Ukuphathwa kwezimpawu zamakhala zerhinitis yonyaka noma engapheli Yebo (iminyaka engu-4 nangaphezulu) Ngaphandle kwelebula
Ukwelashwa kwezimpawu zamakhala zamathambo we-rhinitis yonyaka noma engapheli Ngaphandle kwelebula Yebo, uneminyaka engu-2 nangaphezulu
I-Prophylaxis (ukuvimbela) i-rhinitis ye-allergen yonyaka Ngaphandle kwelebula Yebo, uneminyaka engu-12 nangaphezulu
Ukwelashwa kwama-polyp acinene Ngaphandle kwelebula Yebo, uneminyaka engu-18 nangaphezulu
I-rhinosinusitis yebhaktheriya enamandla, ihambisana nama-antibiotic Ngaphandle kwelebula Ngaphandle kwelebula
Ukuphumula kwesifo se-rhinosinusitis Ngaphandle kwelebula Ngaphandle kwelebula
I-rhinosinusitis engapheli Ngaphandle kwelebula Ngaphandle kwelebula
Ingabe i-Flonase noma i-Nasonex isebenza kangcono?
Esifundweni sezinyanga ezintathu esiqhathanisa uFlonase neNasonex ezigulini ezingama-459 (ezineminyaka eyi-12-77 iminyaka) ye i-rhinitis engapheli , zombili izidakamizwa zitholakale zisebenza ngendlela efanayo futhi zibekezelela kahle.
Okunye, amasonto ayisishiyagalombili amancane funda kweziguli ezingama-75 ezine-allergen rhinitis zifike esiphethweni esifanayo: I-Flonase neNasonex ziyasebenza ngendlela efanayo ekwelapheni izimpawu zokwaliwa.
Isidakamizwa esisebenza kakhulu kuwe singanqunywa nguwe kuphela nodokotela wakho, ongacabangela izimo zakho zezokwelapha kanye nomlando wezokwelapha, kanye neminye imithi oyiphuzayo.
Ukuhlanganisa kanye nokuqhathanisa izindleko kweFlonase vs. Nasonex
I-Flonase imbozwa yimishwalense eminingi kanye ne-Medicare Part D ngendlela yayo ejwayelekile, i-fluticasone. Izinhlobo ezahlukahlukene ze-OTC zegama lomkhiqizo i-Flonase ngokuvamile azimboziwe. I-Nasonex ivame ukumbozwa yizinhlelo eziningi zomshuwalense kanye ne-Medicare Part D ku-generic yayo, i-mometasone. Igama lomkhiqizo lomuthi ngamunye alikwazi ukumbozwa noma lingahlanganiswa ku-copay ephakeme.
Ungathola i-generic Flonase cishe i- $ 11 ne- generic Nasonex ngamanani aphansi njengo- $ 13.50 ngekhuphoni le-SingleCare.
Ngokuvamile embozwe umshwalense? I-OTC: cha
Rx: yebo Yebo, ejwayelekile
Imbozwe ngokwejwayelekile yi-Medicare Part D? I-OTC: cha
Umthamo ojwayelekile Iyunithi eli-1 Iyunithi eli-1
Inkokhelo ejwayelekile yeMedicare Part D $ 0- $ 20 $ 15- $ 145
Izindleko ze-SingleCare $ 11- $ 29 $ 13.50 +
Imiphumela emibi ejwayelekile yeFlonase neNasonex
Kokubili i-Flonase neNasonex zibekezeleleke kahle iziguli. Izimpawu ezivame kakhulu kuzo zombili lezi zidakamizwa ikhanda, izimpawu ze-asthma, isicanucanu / ukuhlanza nokukhwehlela. Eminye imiphumela emibi efakwe kuhlu kuzo zombili lezi zidakamizwa yenzeke kumvamisa ofanayo njenge-placebo (umuthi ongasebenzi), njengamakhala we-noseble kanye nomphimbo obuhlungu.
Eminye imiphumela emibi ingavela. Xhumana nomhlinzeki wakho wezokunakekelwa kwempilo ukuthola uhlu olugcwele lwemiphumela emibi.
Ubuhlungu bekhanda Yebo 6.6% –16.1% Yebo 26%
Isicanucanu / ukuhlanza Yebo 2.6% –4.8% Yebo 2-5%
Khwehlela Yebo 3.6% –3.8% Yebo 7%
Izimpawu ze-asthma Yebo 3.3% –7.2% Yebo 2-5%
Umthombo: DailyMed ( UFlonase ), IDailyMed ( I-Nasonex )
Ukusebenzisana kwezidakamizwa kweFlonase neNasonex
I-Flonase neNasonex zombili zicutshungulwa, noma zenziwe i-metabolic, yi-enzyme ebizwa nge-cytochrome-P 450 3A4, eyaziwa nangokuthi yi-CYP3A4. Le enzyme ibandakanyeka ekuguqulweni kwezidakamizwa eziningi. Imithi ethile ingavimbela le enzyme, futhi yehlise i-enzyme ekucubunguleni i-Flonase noma i-Nasonex, engaholela ekwakhiweni kwe-nasal steroid futhi idale imiphumela emibi ye-steroid. Ngakho-ke, ama-inhibitors anamandla e-CYP3A4 akufanele athathwe ngokuhlanganiswa ne-Flonase noma i-Nasonex, ngoba uma ehlangene angadala imiphumela emibi ye-Flonase noma i-Nasonex.
Okunye ukuxhumana kungahle kwenzeke. Buza umhlinzeki wakho wezokunakekelwa kwezempilo ukuthola izeluleko zezokwelapha
Izidakamizwa Isigaba Sezidakamizwa UFlonase I-Nasonex
Voriconazole I-CYP3A4 inhibitors enamandla Yebo Yebo
Izexwayiso zikaFlonase neNasonex
Imiphumela yasendaweni ingavela kuma-steroid acinene, kufaka phakathi ukuphuma kwamakhala, i-ulceration yamakhala, yendawo UCandida Ukutheleleka (imvubelo), ukugcotshwa kwamakhala kwamakhala, nokuphulukiswa kokulimala kwesilonda.
I-Nasal steroids ingadala i-glaucoma noma i-cataract. Uma unoshintsho kumbono, noma uma unomlando wokukhuphuka kwengcindezi ye-intraocular, i-glaucoma, kanye / noma i-cataract, khona-ke kufanele ubhekwe ngeso lokhozi ngudokotela wezifo zamehlo. Futhi, uma usebenzisa i-Flonase noma i-Nasonex isikhathi eside noma unezimpawu zamehlo, kufanele uxhumane nodokotela wezifo zamehlo njalo.
Uma kwenzeka ukusabela kwe-hypersensitivity (izimpawu zingabandakanya ukuqubuka, ukuphefumula, ukuvuvukala kobuso noma ulimi), yeka ukusebenzisa i-Flonase noma i-Nasonex ngokushesha, futhi ufune usizo oluphuthumayo.
Ama-steroid acindezela amasosha omzimba, ngakho-ke uthambekele kakhulu ekungenweni yizifo ngenkathi usebenzisa i-steroid nasal spray.
Ezinganeni, ukukhula kufanele kuhlolwe ngokucophelela ngoba i-steroids ingadala ukwehla kwe-velocity yokukhula. Umthamo ophansi kakhulu, wesikhathi esifushane, kufanele usetshenziswe.
Ukucindezelwa kwe-Adrenal yisimo esingajwayelekile esingavela. Uma lokhu kwenzeka, i-nasal steroid kufanele ithanjiswe kancane kancane ukuze iyekiswe (i-steroids akufanele imiswe ngokungazelelwe).
Ayikho idatha eyanele mayelana nokusetshenziswa kwe-nasal steroids ku ukukhulelwa Ngakho-ke, kufanele ubonane nodokotela wakho ngaphambi kokuthatha i-Flonase noma i-Nasonex uma ukhulelwe. Uma usuvele uthatha i-Flonase noma i-Nasonex futhi uthola ukuthi ukhulelwe, xhumana nomhlinzeki wakho wezokunakekelwa kwezempilo ukuze akuthole.
Imibuzo ebuzwa njalo ngeFlonase vs. Nasonex
I-Flonase iyi-nasal steroid esetshenziselwa ukwelapha izimpawu zokungezwani komzimba. Ingasetshenziswa kubantu abadala nezingane ezineminyaka engu-4 nangaphezulu. Itholakala ngemithi kadokotela kanye ne-OTC.
I-Nasonex iyi-nasal steroid esetshenziselwa ukwelapha izimpawu zokungezwani komzimba nabantu abadala nezingane ezineminyaka engu-2 nangaphezulu. Ingasetshenziselwa ukwelapha ama-polyp nasal ezigulini ezineminyaka engu-18 nangaphezulu, nokuvikela izimpawu zokungezwani komzimba neziguli ezineminyaka engu-12 nangaphezulu. Itholakala ngodokotela kuphela.
Ngabe uFlonase neNasonex bayafana?
IFlonase neNasonex banokufana okuningi. Kokubili ama-steroid acinene asetshenziswa ekwelapheni izimpawu zomzimba ezingezwani nomzimba. Futhi zinokuhlukahluka okuningana, okufana nezinkomba zokusetshenziswa, ukutholakala, kanye nentengo. Amanye ama-nasal steroids okungenzeka ukuthi uke wezwa ngawo afaka i-Nasacort (triamcinolone) ne-Rhinocort Allergy (budesonide), kanye ne-Dymista efaka i-nasal steroid (i-fluticasone) kanye ne-antihistamine (azelastine).
Ungaqhathanisa ezinye izidakamizwa zokungezwani komzimba kumakhasi alandelayo:
I-Flonase vs. Nasacort
UDymista vs. Flonase
I-Rhinocort vs. Flonase
I-Afrin vs. Flonase
Ngabe iFlonase noma iNasonex ingcono?
UFlonase noma uNasonex babonakala benjalo kusebenza ngokulinganayo ekusizeni ukuthuthukisa izimpawu zamakhala futhi zombili zibekezeleleka kahle. Ungacela udokotela wakho akusize uthathe isinqumo yimuphi umuthi kungahle kube ngcono kuwe-kwesinye isikhathi kudinga ukuhlolwa okuncane nephutha ukuthola ukuthi yimuphi umuthi osebenza kangcono kuwe.
Ngingasebenzisa i-Flonase noma i-Nasonex ngenkathi ngikhulelwe?
Kuya ngesimo. I-Flonase noma i-Nasonex kungaphepha ukusetshenziswa uma ukhulelwe , noma kungekho idatha eningi. Buza nge-OB-GYN yakho ukuthola isiqondiso.
kuphephile ukuzivocavoca kuma-beta blocker
Ngingasebenzisa i-Flonase noma i-Nasonex ngotshwala?
I-Flonase noma i-Nasonex kungenzeka ezinye izindlela eziphephile kumithi yendabuko yokungezwani komzimba uma ufuna ukuphuza noma ezimbili. Buza umhlinzeki wakho wezokunakekelwa kwempilo ukuze uqiniseke ukuthi utshwala buyahambisana nanoma imiphi imithi oyiphuzayo, noma yiziphi izimo zezokwelapha onazo.
Yisiphi isikhathi esihle sokuthatha i-Flonase?
Isikhathi sosuku asibalulekile. Ungathatha umthamo wakho wansuku zonke ekuseni noma kusihlwa. Kuhle ukukhetha isikhathi ozokhumbula ngaso sonke isikhathi ukuthatha i-Flonase nsuku zonke.
Ingabe i-Flonase i-antihistamine noma i-decongestant?
IFlonase iyi-nasal steroid, esiza ukuqeda ukuvuvukala kwamakhala nokuminyana.
Ungayisebenzisa i-Nasonex nsuku zonke?
I-Nasonex kufanele isetshenziswe nsuku zonke lapho idingeka ukuze isebenze kahle. Isibonelo, uma uvame ukuba nezimpawu zokungezwani komzimba kusuka ngo-Ephreli kuya kuJuni, ungahle uthande ukuqala ukusebenzisa i-Nasonex amasonto amabili ngaphambi kokuthi ube nezimpawu futhi uqhubeke nokuyisebenzisa nsuku zonke kuze kufike isikhathi lapho ungasenazo izimpawu zokungezwani komzimba. Uma unezimpawu zonyaka wonke, khuluma nodokotela wakho ngokusebenzisa i-Nasonex unyaka wonke.
Impilo yamathumbu ingayithinta kanjani impilo yakho yonke
3 imibuzo ebalulekile yomshwalense ongayibuza ngesikhathi sokukhulelwa
ukuthi unakekela kanjani ukutheleleka kwemvubelo ekhaya
kufanele ngidle lapho nginomkhuhlane
yimuphi umuthi opholisa izinhlungu ongawuphuza notshwala
yini ukufundwa okuhle kweglucose yokuzila ukudla
uhlelo oludonswayo oluphakeme lwezempilo lokudonswa kwezidakamizwa
i-albuterol ihlala isikhathi esingakanani ohlelweni lwakho